Showing १३१-१४० of ६५२ items.
सिअाइडिकाे सेटमा नायिका मलिना जाेशी
पुर्व मिस नेपाल मलिना जोशीको आफनो अभिनय यात्रा सहज देखिएको छैन् । उनले अभिनय गरेका चलचित्रहरु त औषत त के डिजास्टर नै भयो । कुनै समय अनुपबिक्रम शाहीको प्रेमिकासमेत रहेकी उनको पछिल्लो समय ‘रानी’ र ‘लिला’ चलचित्र रिलिज भए । ती दुबै चलचित्रहरु असफल भए । ‘ऋतु’मार्फत नेपाली रजतपटमा डेब्यु गरेकी मलिना सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै सक्रिय छिन् । केही समय अगाडी बलिउड नायक निल नितिन मुकेशसंगको तस्बिरका चर्चामा आएकी मलिनाले फेरी अर्काे तस्बिर सेयर गरेकीछिन् । उनले चर्चित शो सिआईडीका चर्चित पात्र दया अर्थात दयानन्द शेट्टीसंगको तस्बिर सेयर गरेकीछिन् । उनले तस्बिर सेयर गर्दे लेखेकीछिन् ‘सिआइडीको सेटमा ।’ साथ
प्रकाशित मितिः फाल्गुन १६, २०७४
श्रीदेवीसँगकाे त्याे भेट !
म त्यति बेला दाङमा थिएँ । एथ्लेटिक्समा ध्यान दिने भएकाले बारम्बार काठमाडौं आइरहेको हुन्थेँ । अन्य सहरमा पनि पुग्थेँ । बलिउड फिल्मको त्यति बेला निकै रजगज थियो । फिल्म हेर्न मलाई पनि औधी मन हुन्थ्यो । त्यसैले धेरैजसो हिन्दी फिल्म म नछुटाई हेर्थेँ । फिल्म हेर्दाको त्यो समयमा श्रीदेवी मेरो मनमा अचम्मले गडेर बस्नुभयो । उहाँको अभिनय र सौन्दर्यले मलाई लोभ्यायो । काठमाडौंबाटै हुनुपर्छ वा अन्यत्र कतै गएर दाङ फर्किएको हुनुपर्छ, मैले सुनेँ– श्रीदेवी, अमिताभ बच्चनलगायत भारतीय कलाकारहरु नेपालमा आउँदै छन् । अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी नेपाल आउने कुराले दाङमा भए पनि मलाई उत्साहित गरिहाल्यो । भेटूँभेटूँ जस्तो भयो
प्रकाशित मितिः फाल्गुन १५, २०७४
श्रीदेवीको मृत्यु: अत्याधिक रक्सीको नशामा बाथटपमा डुबेर
मुम्बई/एजेन्सी– बलिउड अभिनेत्री श्रीदेवी कपुरको मृत्यु पानीमा डुवेर भएको प्रमाणित भएको छ । उनको मृत्यु हृदयघातका कारण भएको समाचार उनका परिवारले सम्प्रेषण गरेका थिए । दुबईको खालिज टाइम्स दैनिकका अनुसार श्रीदेवीको मृत्यु रक्सीको नशामा बाथरुमको बाथटपमा भरिएको पानीमा डुवेर भएको हो । उनी बाथटपमा डुबेको अवस्थामा भेटिएको र त्यहाँबाट उद्धार गरेर अस्पताल पु¥याइएको सो पत्रिकाले जनाएको छ । यूएईको फरेन्सिक डिपार्टमेन्टले दिएको रिपोर्टअनुसार पनि उनको निधन पानीमा डुवेर भएको देखिन्छ । श्रीदेवीलाई उनी बसेको दुबईको अमिरात टावर्स होटलको बाथरुममा बेहोस अवस्थामा भेटिएको उनका परिवारले बताएका थिए । तर पछिल्लो रिप
अचानक श्रीदेवीकाे मृत्यु कसरी भयाे ?
अभिनेत्री श्रीदेवीलाई कुनै रोगले च्यापेको थिएन । उनी थलिएकी थिइनन् । वा रोगको उपचार पनि गराइरहेकी थिइनन् । सग्लो थिइन् । स्वस्थ्य थिइन् । उनी मनोरञ्जनकै मुडमा थिइन् । दुबईमा आफ्ना भान्जाको बिहे थियो, त्यही रमझममा सामेल हुन पति बोनी कपुर र कान्छी छोरीसँग दुबई पुगेकी थिइन् । तर, अचानक उनको मृत्यु भयो । के कारणले यसरी अचानक मृत्यु हुनसक्छ ? वास्तवमा हृदयघातको कारण उनको अनपेक्षित मृत्यु भयो । यो अचानक हुने दुर्घटना हो । यसलाई साइलेन्ट हार्ट अट्याक्ट पनि भनिन्छ । यस्तो जो कोहिलाई हुनसक्छ, जहाँपनि हुनसक्छ । सग्लो व्यक्तिको अचानक मृत्यु हुन्छ भने, त्यसको पहिलो कारण हुनसक्छ साइलेन्ट हार्ट अट्याक
प्रकाशित मितिः फाल्गुन १४, २०७४
चलचित्र ‘मंगलम’ काे टीम बिर्तामाेडमा
बिर्तामोड । नेपालमा चलचित्रले भने जस्तो व्यापार गर्न नसके पनि चलचित्र निर्माण गर्नेमा भने कमि आएको देखिदैन । यसैक्रममा नायिका शिल्पा पोखरेलले निर्माण गरेको पहिलो चलचित्र ‘मंगलम’ रिलिजको तयारीमा छ । नायिका पोखरेलको पहिलो चलचित्र मंगलम फागुन २५ गते उपत्यका बाहिर ५० र उपत्यकाभित्र १८ सिनेमा हलहरुमा एकैसाथ प्रदर्शनमा रहेको जनाइएको छ । बजार प्रवर्धन देश दौडाहामा रहेको चलचित्र निर्माण टिमले आइतवार झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी चलचित्रका बिषयमा जानकारी दिएको हो । चलचित्र मंगलमका कार्यकारी निर्माता छविराज ओझाले आफुले निर्माण गरेको अन्य चलचित्र भन्दा यो चलचित्र फरक रहेको बताए । छविर
दिपकराज गिरीको छोरी मौसमीको बिवाह सम्पन्न
कलाकार तथा निर्माता दिपकराज गिरीको छोरी मौसमी गिरीको बिवाह सम्पन्न भएको छ ।नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका मेयर सञ्जु पण्डितका छोरा सुशील पण्डितसँग हिन्दु परम्परा अन्र्तगत शनिबार मौसमीको बिवाह सम्पन्न भएको हो । आफ्नो फेसबुकमा दिपकले पोष्ट गर्दै लेखेका थिए हातका औलाहरु धेरै हुन्छन् र त्यसको नाम पनि भिन्न हुन्छन् । मुटु एउटै हुन्छ, र त्यसको नाम मुटु हो ।’ शनिबार दिपकले आफ्नो मुटु एक मात्र छोरी मौसमी सुशिलको हातमा सुम्पिएका छन् । मौसमीको बैवाहिक समारोहमा चलचित्र क्षेत्रका केही व्यक्तीत्वहरु समेत उपस्थीत भएका थिए ।
प्रकाशित मितिः फाल्गुन १३, २०७४
बिकिनीमा भाइरल भएपछि फ्यानलार्इ नै...
बलिउडमा टाइगर श्राफको फिल्म ‘मुन्ना माइकल’बाट इन्ट्री गरेकी अभिनेत्री निधी अग्रवालले यतिबेला हंगामा मच्याइरहेकी छिन् । फिल्मको कारणले होइन । न लभ रोमान्सको कारणले नै । केवल बोल्ड तस्विरको कारणले । अहिले उनको बोल्ड तस्विर सोशल मिडियामा भाइरल भएको छ । यस तस्विरमा उनको बोल्डनेसको जति तारिफ भएको छ, उत्तिनै भद्दा कमेन्ट पनि आइरहेको छ । निधीले आफ्नो सोशल एकान्टमा बिकिनी फोटो शेयर गरेकी हुन् । उनी कालो बिकिनीमा छिन् । यस्तो गेटअपमा उनी निकै आकर्षक र हट देखिन्छ । तर, उनको सेक्सी फिगरलाई लिएर भद्दा कमेन्ट पनि गरिएको छ । केहि इन्टाग्राम प्रयोगकर्ताले कमेन्ट गर्दै लेखेका छन्, ‘तिमी भन्दा तिम्रो आर्मपिट
काठमाडौं । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको निधन भएको छ । हृदयाघातका कारण उनको गएराति दुबईमा निधन भएको हो । फिल्म इन्डस्ट्री भित्रका र त्यस बाहिरका धेरै व्यक्तिहरुले श्रीदेवीको निधनमा शोक व्यक्त गरेका छन् । श्रीदेवीको जन्म १३ अगस्ट १९६३ मा तमिलनाडुमा भएको थियो । उनले आफ्नो पहिलो करियरको शुरुआत केबल चार वर्षको उमेरदेखि नै गरेकी थिइन् । उनी चार वर्षको छँदै तमिल फिल्म कन्धन करुणईमा अभिनय गरेकी थिइन् । उनले बाल कलाकारको रुपमा तेलुगु र मलयालम फिल्ममा पनि अभिनय गरिन् । दक्षिण भारतीय फिल्ममा काम गरेपछि श्रीदेवीले सन् १९७९ मा मुख्य कलाकारको रुपमा ‘सोलहवा साल’बाट हिन्दी फिल्ममा अभिनय शुरु गरेकी थ
डिप्रेशनले यस्ती बनायो ‘जिया धडक धडक’की अभिनेत्रीलाई
निर्देशक मोहित सुरीकी बहिनी स्माइली सुरीले ‘कलयुग’मार्फत् फिल्ममा डेब्यु गरेकी थिइन् । ‘कलयुग’ नहेर्नेले पनि उक्त फिल्ममा रहेको ‘जिया धडक धडक’ त सुनेकै हुनुपर्छ । उक्त गीतमा देखिएकी अभिनेत्री हुन् स्माइली । ती सुन्दर र मुस्कानकी खानी स्माइलीको अचेल बदलिएकी छिन् । डिप्रेशनका कारण उनी मोटी मात्रै भएकी छैनन्, थायराइडबाट पनि ग्रसित छिन् । डिप्रेशनलाई जित्न अहिले उनी पोल डान्स सिकिरहेकी छिन् । उनलाई सानैदेखि नृत्यमा रहेको सोख पूरा गरेर डिप्रेशनबाट मुक्ति पाउनुछ । उनी अरुलाई पनि यसका लागि प्रोत्साहन गरिरहेकी छिन् । भनिरहेकी छिन्, ‘केही न केही गर्नुपर्छ नत्र डिप्रेशन जस्ता खराब स्वास्थ्य समस्याले अं
यसकारण टुट्यो अभिषेक र करिश्माको ५ बर्षे प्रेम र इन्गेज्मेण्ट
बलिउडमा त्यस्ता कयौ प्रेमी जोडीहरु थिए जसको प्रेम लामो समय रह्यो तर त्यसको अन्त्य दुखद तरिकाले भयो । धेरै जसो प्रेमी जोडीको ब्रेकअप हुनुमा कोही परिवार दोषी थियो त कसैको करियर अगाडी आयो । यस्तै छुटेका जोडीमध्ये पर्छन् अभिषेक बच्चन र करिश्मा कपुर । पाँच बर्षे प्रेम सम्बन्धमा रमाएका यो जोडीको सम्बन्ध यसरी टुक्रियो की आजसम्म पनि यो जोडीको प्रेम टुट्नुको रहस्य बाहिर आउँन सकेको छैन । करिश्माको आफन्तसंग नै अभिषेकको दिदीको बिवाह भएको कारण पनि अभिषेक र करिश्मा नजिकिएका थिए । पाँच बर्ष प्रेममा रहेपछि यी दुईको इन्गेज्मेण्ट समेत भएको थियो । अमिताभ बच्चनको ६० औँ जन्मदिनमा यी दुईको पारिवारिक सहमतीमा नै भब्